[ February 25, 2020 ] ငွေကြေး အခက်အခဲကြောင့် နွားမကြီး (၁)ကောင်အား ခိုးယူမှုဖြစ်ပွါး	NEWS
[ February 25, 2020 ] ဆီဘောက်ဆာ ရေဘောက်ဆာတွေက ဘဲဥပုံ ဆလင်ဒါတွေဖြစ်နေရတဲ့ အကြောင်းအရင်းမှန်	KNOWLEDGE
[ February 25, 2020 ] လမ်းမကြီးအတိုင်းလာသော ယာဉ်ကို ဦးစာမပေးပဲ ဖြတ်မောင်းရာမှ တိုက်မှုဖြစ်ကာ (၁)ဦးသေဆုံး(၁)ဦးဒဏ်ရာရ	NEWS
စစ်ကိုင်းတံတားပေါ်မှာ ရထားတစ်စီး မီးလောင်မှုဖြစ်
February 14, 2020 Alinn Pya 0
ဖေဖော်ဝါရီ(၁၄) AlinnMyay(အလင်းမြေ) စစ်ကိုင်း – မန္တလေး အင်းဝတံ တားပေါ်မှာ ဖေဖော်ဝါရီ(၁၄)ရက် ညနေ(၆)နာရီခွဲကျော် အချိန့်ခန့်တွင် မန္တလေး-မြစ်ကြီးနား လူစီးစာပို့ရထားသည် ဘရိတ်တွဲကနေ အပူလွန်ကဲရာမှ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ မန္တလေးဘူတာကနေ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက် ညနေ(၆)နာရီခန့်က ထွက်ခွါလာခဲဲ့တဲ မြစ်ကြီးနား အမှတ်(၄၁)အဆန် လူစီးစာပို့ရထားဟာ အင်းဝတံတား(စစ်ကိုင်း) အလယ်ရှိ ကုန်းငါးကုန်းမြောက်နဲ့ ခြောက်ကုန်းမြောက်အရောက်တွင် မန္တလေးဘက်အခြမ်းက ရထားရဲ့နောက်ဆုံးတွဲ ၁၁တွဲမြောက်(ကုန်ပါဘရိတ်တွဲ)မှာ မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး တွဲသုံးတွဲမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပါတယ်။ မီးရထားမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားရာကို […]
(၈၈)နှစ်အရွယ် ကျောင်းဆရာမကြီးအိမ် မီးလောင်းရာ စုဆောင်းထားငွေ(၄၇)သိန်း မီးလောင်ပျက်စီး
အသက်(၈၈)နှစ်အရွယ်ရှိ ကျောင်းဆရာမကြီး၏ နေအိမ် မီးလောင်းရာ စုဆောင်းထားငွေ(၄၇)သိန်း မီးလောင်ပျက်စီး ရန်ကုန်၊ဖေဖော်ဝါရီ-၁၄ မြင်းခြံမြို့၌ နေထိုင်သည့် အသက်(၈၈)နှစ်အရွယ်ရှိ ကျောင်းဆရာမကြီး၏ နေအိမ် မီးလောင်ခံရ၍ စုဆောင်းထားငွေ(၄၇)သိန်း မီးလောင်ပျက်စီးသွားကြောင်း ဆရာမကြီး၏ တပည့်ဖြစ်သူ ဦးချင်းကိုကိုကပြောပါတယ်။ ဖြစ်စဉ်မှ ဖေဖော်ဝါရီ(၁၃)ရက်နေ့ ညနေ(၅)နာရီအချိန်ခန့်၌ မြင်းခြံမြို့၊အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၌ မီးလောင်မှုဖြစ်ပေါ်ရာ ဆရာမကြီးနေထိုင်သည့် နေအိမ်ကို မီးကူးဆက် လောင်ကျွမ်းခဲ့ပါတယ်။မီလောင်နေချိန်၌ အနီးရှိ ဘော်ဒါမှ ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများမှ ကူညီမှုကြောင့် အသက်ရှင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ မီးလောင်ရာရပ်ကွက်ကို မီးသတ်မှ […]
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့မှာ အမေရိကန် နဲ့ အခြားသောနိုင်ငံတွေမှာ ချစ်ခင်ရသူတွေအချင်းချင်း သကြားလုံးတွေ ချောကလက်တွေ ပန်းစည်းတွေ ပေးကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီ Valentine Day ရဲ့ အဓိပါ္ပယ်က ဘာလဲ ? ဘယ်ကနေ ဆင်းသက်လာတာလဲ ? အခု ရှာကြည့်ရအောင်ပါ။ ဖေဖော်ဝါရီလဟာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ လတစ်လဖြစ်တာကို ကျွန်တော်သိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် St.Valentine Day လို့ခေါ်တဲ့ Valentine […]
မန္တလေး ရတနာပုံသဘော်ကျင်း ဝင်းအတွင်း မီးလောင်မှုဖြစ်ပေါ်
ဖေဖော်ဝါရီ(၁၄) AlinnMyay(အလင်းမြေ) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ စိန်ပန်းရပ်ကွက်အကွက်(၃၈၁)၊ ၄၀၄၁လမ်းကြား၊ ၉၃လမ်းကမ်းနားလမ်း၊ ရတနာပုံသဘော်ကျင်းဝင်းအတွင်း မီးလောင်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဦးကျော်မျိုးနိုင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဓနဖြိုး ၁၅၃၂၁ ပုဂ္ဂလိက ကုန်တင် ရှပ်ပြေးရေယာဉ်မီးလောင်ကျွမ်းမှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမီးသတ်ဦးစီးဌာန တိုင်ဦးစီးမှူးဦးသန်းဇော်ဦးနဲ့အတူ မန္တလေးခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးအောင်မွန်လတ်ခရိုင်မီးသတ်ဦးစီးမှူး ဦးကျော်ဆွေမဟာအောင်မြေမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးနိုင်ဝင်း၊မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရဲမှူးဝင်းနိုင် မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဇော်ဝင်းနို်င်မြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးမှူးဦးညွန့်ဝင်းအောင်နဲ့မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် သန္တေ(၂၀)အရန်(၁၀၀)ဦးတို့နဲ့၊ Level ( 1)၊စေလွှတ်ပြီးမီးငြိမ်းသတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုလိုမီးလောင်မှုကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုတန်ဘိုးမှာဆီဂါလံ(၃၀) တန်း(၁၂၀၀၀၀)၊ကိုပိုတာစက်(၃၀၀၀၀)စုစုပေါင်းတန်ဘိုး(၁၅၀၀၀၀)ကျပ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးမီးပေါ့ဆစွာသုံးစွဲသူဦးကျော်မျိုးနိုင်ကို အမှတ် ၇ စခန်းက ပုဒ်မ ၂၈၅ နဲ့ အရေးယူဆောင်ရွက်ထားပါတယ်။ မန္တလေးရင်ခတ်သံ #AlinnMyay(အလင်းမြေ) […]
ပြည်ထောင်စုနေ့မှာ ဘေထုတ်ရောင်းသည့် စျေးသည် ငွေကျပ် ၁၅ သိန်း အခိုးခံရ
ဖေဖော်ဝါရီ(၁၄) AlinnMyay(အလင်းမြေ) တောင်ငူမြို့ ၊ ခရိုင်းအားကစားကွင်းအတွင်း ၊ ဘေထုတ် အကျီ င်္များရောင်းချ သော စျေးသည် တစ်ဦး ငွေကျပ် ၁၅ သိန်း ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက် မနက်ပိုင်းက အခိုးခံခဲ့ရကြောင်း ပျောက်ဆုံးသူ အမျိုးသမီးထံမှ သိရပါတယ်။ “ကျမ မန္တလေးဘက်က လာရောင်းတာပါ ၊ ပြည်ထောင်စုနေ့ ပွဲလာရောင်းရင်း အဲ့ဒီနေ့ မနက်ပိုင်းက ငွေကျပ် ၁၅ သိန်း ထည့်ထားသည့် […]
မီးရှို့နှိပ်စက်ခံရသည့် ၁၃ နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်ကို ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသို့ လွှဲပြောင်း
၁၇ နှစ်အရွယ် လူငယ်တစ်ဦး ပျောက်ဆုံးနေ၍ တွေ့ရှိပါက ဆက်သွယ်ကူညီပေးကြပါရန် မိဘများတောင်းဆို
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လပွတ္တာမြို့က ဆီလောင်းမီးရှို့ခံရတဲ့ အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်ကို လပွတ္တာမြို့နယ်၊ ၃ မိုင်ဆေးရုံမှ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသို့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက် ညပိုင်းမှာ လွှဲပြောင်းပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဆေးရုံက လူမှုဆက်ဆံရေးအရာရှိ ကိုအောင်မျိုးခိုင်က “ကာယကံရှင်ရဲ့ ဆန္ဒအရ လွှဲပြောင်းပေးလိုက်တာပါ၊ ရန်ကုန်မှာသွားကုရင်တော့ ပိုကောင်းမယ်၊ သွားချင်လားလို့မေးလိုက်တော့ သွားမယ်ဆိုတာနဲ့ လွှဲပေးလိုက်တာပါ” လို့ ဒီဗွီဘီကိုပြောပါတယ်။ အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ် မောင်ဖိုးစနေဟာ မိခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူ တုနှိုင်းမမီ […]
ဖေဖော်ဝါရီ(၂၅) AlinnMyay(အလင်းမြေ) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ တံတားဦးမြို့နယ်၊ အင်ကးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဂုန်ပင်အိုင်ကျေးရွာနေ၊ အဖ ဦးအောင်မင်း ၏ သားဖြစ်သူ မောင်မင်းသန့်ဦး(ခေါ်)မိုးဒီ အသက်(၁၇) နှစ်သည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ အေးသုခလမ်း၊ ၅၆ လမ်းနှင့် ၅၇ လမ်းကြား၊ (ဆ) ရပ်ကွက်၊ စံဆောက်လုပ်ရေး တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေရာမှ ပျောက်ဆုံးနေပါသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ နယ်မြေရဲစခန်းတွင် လူပျောက်အမှတ်စဉ် (၃/၂၀၂၀) ဖြင့် အမှုဖွင့် တိုင်ကြားထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ဓာတ်ပုံများနှင့် တကြ […]
အစွမ်းထက်မြတ်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်
“ထီဖွင့်ဖို့ ရက်နီးလာပြီမို့ အစွမ်းထက်မြတ်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်” ထီဖွင့်ဖို့လည်းနီးလာခဲ့ပါပြီ ဒါကြောင့် အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာမင်္ဂလာပါ သူဌေး မင်းထီဆိုင်ကြီးမှ ကူးယူဖော်ပြအပ်ပါသည် အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာ ရှေးကျမ်းရင်းတစ်စောင်မှာ ဖော်ပြထားပြီး အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂါထာရဲ့အဓိပ္ပါယ်အတိုချုပ်က ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှိစဉ်က ကောဏ္ဍဝေန မထေရ်ကြီးသည် ပထမစာရေးတံမဲကို အမြဲတမ်း ပေါက်ခဲ့၏ ထို့အတူ ကျွန်ုပ်သည်လည်းဤသို့ ဖြစ်ရပါစေသတည်း” ဟု ဆိုထားပါတယ်။ ရှေးဟောင်းပေစာ တစ်ခုထဲမှာလည်း ဒီဂါထာရဲ့ အစွမ်းကို […]